काठमाडौं,२७ मंसिर– हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा वाममन्थी गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरेका छन् । समानुपातिक तर्फको मतगणनाले वामपन्थी दलले दुईतिहाइ मत पाउने नपाउने यकिन हुनेछ ।
वामपन्थी गठबन्धनले बहुमत पाएपछि देशमा स्थिर सरकार बन्ने र समृद्धिको बाटो खुल्ने कतिपयले आशा व्यक्त गरेका छन् । राजनीतिक अस्थिरता विरुद्ध स्थिर सरकार र सुशासनको नारा लिएर चुनावमा उठेका वाम गठबन्धले नेपाली जनताको उत्ताहजनक मत प्राप्त गरेको छ ।
वामपन्थी गठबन्धनप्रति नेपालका चर्चित विशेषज्ञ चिकित्सकहरुको धारणा के छ ? लोकान्तरसँगको कुराकानीमा केहीले आशा व्यक्त गरे भने केहीले वामपन्थी गठबन्धनको सरकारका काम हेरेर प्रतिक्रिया दिने बताए ।
वामपन्थीहरुको लागि राम्रो अवसर : डा. रिजाल
नेपालका वरिष्ठ चिकित्सक एवं स्त्रीरोग विशेषज्ञ डाक्टर भोला रिजालले यसपटकको चुनावले वामपन्थी गठबन्धनलाई राम्रो अवसर दिएको बताएका छन् । जनताले स्थायी सरकार बनोस भनेर वामपन्थी गठबन्धनलाई छानेको उनले बताए ।
वामपन्थीहरुलाई जनताले सत्ताको खेल र हरेक क्षेत्रमा भइरहेको राजनीतिकरण बन्द गरेर कसैको प्रलोभनमा नपरि जनमुखी काम गर्ने अवसर दिएका हुन् ।
‘प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मतपरिणामले जुन लहर ल्याएको छ, यो स्थायी सरकार बनोस् भन्ने जनताको चाहना हो । सबै पार्टी मिलेर सरकार एक भएर विकास गरोस्, भष्ट्राचार निर्मुल होस् भनेर वामपन्थीलाई जनताले समर्थन गरेका छन् ।’ उनले लोकान्तरसंगको कुराकानीमा भने, ‘यो वामपन्थीहरुको लागि राम्रो अवसर हो । वामपन्थीहरुलाई जनताले सत्ताको खेल र हरेक क्षेत्रमा भइरहेको राजनीतिकरण बन्द गरेर कसैको प्रलोभनमा नपरि जनमुखी काम गर्ने अवसर दिएका हुन् ।’
राजनीतिक अस्थिरताको कारण नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव रहेका भन्दै उनले स्थायी सरकार बनेपछि शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार हुने अपेक्षा गरे ।
‘सरकारी लगानीमा संचालित स्कुल, अस्पतालहरुमा राजनीतिकरण हुँदा, पढ्ने क्षमता भएका विद्यार्थीले अवसर पाएका छैनन् । दक्ष चिकित्सको समस्या पनि व्याप्त छ ।’ उनले भने, ‘अबको सरकारले स्कुल, कलेज, अस्पताल लगायत हरेक क्षेत्रमा भइरहेको राजनीतिकरण बन्द गर्नुपर्छ ।’
पूर्ण विश्वास गर्ने अवस्था छैन : डा कोइराला
मुटु रोग विशेषज्ञ डा.भगवान कोइरालाले पनि वाम गठबन्धनले प्राप्त गरेको मतलाई जनताले दिएको अवसरको रुपमा हेरेका छन् । लोकतन्त्रको आधारशिला निर्वाचन भएको बताउँदै डा. कोइरालाले निर्वाचनमा हार्ने पार्टीले जनता सामु आगामी दिनमा राम्रो काम गरेर जनताको विस्वास जित्ने प्रयास गर्नुपर्ने र जित्ने पार्टीले सरकारमा राम्रो काम गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
वामगठबन्धनले स्थिर सरकारमा रहने अवसर पाएको छ, आफ्नो दल, पक्षप्रतिपक्ष नभनी देश र जनताको हितमा काम गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ ।
उनले सरकार गठन नभए सम्म वाम गठबन्धनलाई पूर्ण रुपमा विस्वास गर्न नसकिने बताए ।
‘वामगठबन्धनले स्थिर सरकारमा रहने अवसर पाएको छ, आफ्नो दल, पक्षप्रतिपक्ष नभनी देश र जनताको हितमा काम गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ ।’ डा.कोइरालाले लोकान्तरसँग भने, ‘देश र जनताको हितमा विकास गर्छन् वा गर्दैनन् भनेर ठोकुवा गर्न मिल्दैन । अब सरकार गठन भएपछि नै भन्न सकिन्छ । कस्तो व्यक्तिलाई राख्छन् । जनताको मतको कदर हुन्छ वा हुदैन अब बन्ने सरकारको कार्यशैलीलमा भर पर्छ ।’
प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा केही राम्रा उम्मेदवारले पनि हारेको उनको बुझाइ छ ।
राम्रो काम नगरे आर्कोपटक वामपन्थीको हालत खराव : डा अरुणा
प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले महिलाको मुद्धामा जनतालाई धोका दिएको डाक्टर अरुणा उप्रेतीले बताइन् । अन्य समयमा महिलालाई सवल,सक्षम र राजनीतिक अधिकार दिनुपर्छ भनेर आवाज उठाएपनि संसदमा पुग्ने समयमा महिलालाई सहभागीता नगराएको उनको आरोप छ ।
‘सबै राजनीतिक दलहरुले यो चुनावमा महिलाहरुलाई एकदमै कम मौका दिए । जुन ठाउँमा आफ्नो दलको अवस्था कमजोर छ, त्यहि ठाउँमा महिलाहरुलाई नामको लागि मात्रै उम्मेदवार बनाए ।’ डा. उप्रेतीले लोकान्तरसंग भनिन्, ‘संघीय संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला हुनेपर्ने संविधानमा नै उल्लेख गरिएको छ । तर अहिलेसम्म पाँच जना मात्रै महिला निर्वाचित भएका छन् । समानुपातिकमा ८० प्रतिशत महिला आएनन् भने, संविधानको धज्जी उठाएको जस्तो हुन्छ ।’
अहिलेको सरकारले जनतालाई मुर्ख सोचेर देश विकास नगरेकोले वामपन्थीलाई भोट दिएर जनताले सबक सिकाएको डा.उप्रेतीको तर्क छ ।
वाम गठबन्धनले जनताले खोजे अनुरुप कार्य गर्न सकेनन् भने अर्को पटक साथ दिदैनन् । विवेकशीलका उम्मेदवारलाई आएको भोटले पनि यो कुरा सावित गरेको छ ।
उनले भनिन्,‘ वाम गठबन्धनले स्पष्ट स्थायी सरकार बनाउने र विकास गर्ने निति लिएकाले जनताले आसा गरेर भोट दिएका हुन् । वाम गठबन्धनले जनताले खोजे अनुरुप कार्य गर्न सकेनन् भने अर्को पटक साथ दिदैनन् । विवेकशीलका उम्मेदवारलाई आएको भोटले पनि यो कुरा सावित गरेको छ । जनताहरु नयाँ र सफल राजनीतिज्ञको खोजीमा छन् ।’
राजनीतिक अवस्थाले शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रभाव पारेको भन्दै उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई मेडिकल हब बनाउछु भनेर जनतालाई आसा देखाउनु गतल भएको बताइन् ।
‘स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास गर्ने भन्दै अस्पताल मात्रै खोलेर हुदैन । नेपालमा राम्रा डाक्टर उत्पादनको लागि मेडिकल शिक्षामा ध्यान दिनुपर्यो, सरकारी मेडिकल कलेजहरु, संचालनमा रहेका सरकारी अस्पतालहरुलाई पहिला व्यवस्थित गर्नुपर्यो ।, ‘एमाले अध्यक्ष ओलीले मेडिकल हब बनाउँछु भनेर दिएको भाषणको आलोचना गर्दै डा. उप्रेतीले भनिन्, ‘नेपालमा अहिले मेडिकल हब बनाउन जरुरत छैन । पहिला सरकारी स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्यो । सरकारी अस्पताल र शैक्षिक संस्थाको हालत गहिगुज्रेको छ त्यसलाई व्यवस्थापन गनुपर्यो ।’